Global Aawaj | किन बंगलादेशमा दुर्गा पूजापछि भड्किएको हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिएन ? किन बंगलादेशमा दुर्गा पूजापछि भड्किएको हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिएन ?
किन बंगलादेशमा दुर्गा पूजापछि भड्किएको हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिएन ?
एजेन्सी । अहिले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दू समुदायको आस्थामाथि एकपछि अर्को हमला भइरहेको छ । अज्ञात मुस्लिम आक्रमणकारीहरुले हिन्दू मन्दिरमा तोडफोड गर्नुका साथै त्यहाँ भएको नगदसमेत लुटेका छन् । दुर्गा पूजाका क्रममा हिन्दूमाथि भएको हमलाको बिरोधमा वंगलादेश हिन्दू बौद्ध क्रिष्चियन एकता परिषद्ले २३ अक्टोबरदेखि अनसन र भोक हड्ताल घोषणा गरेको छ ।
बंगलादेशमा हिन्दुमाथि आक्रमण भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि पटक पटक हिन्दू समुदायमाथि, मन्दिर वा पूजाको तयारीको क्रममा मूर्तिहरुको तोडफोड गर्ने घटनाहरु भैरहेका छन् । तर, यस पटक दुर्गा पूजाको समयमा भएको हिंसा पहिलो हो ।
प्रशासनको कमजोरीको कारण यति ठूलो मात्रामा हिंसा भएको हिन्दू समुदायका मानिसहरुको आरोप छ । पूजा उद्योग परिषद्का केन्द्रीय सचिव निर्मल चटर्जी भन्छन्, ‘हामीले पूजा भन्दा पहिले नै सुरक्षा इन्चार्जहरुसंग कुरा गरीसकेका थियौँ र उनीहरुले सुरक्षाको आश्वासन दिएका थिए । हामीले बारम्बार सरकार र प्रशासनलाई भनेका थियौं कि शरारती तत्वहरुले यस्ता घटनाहरु गराइरहेका छन्। उनीहरुले हामीलाई बारम्बार आश्वासन दिएका थिए। तर, मान्छे मारिए, मन्दिरहरुमा तोडफोड भयो। यसमा प्रशासनको गल्ती छ अन्यथा यस्तो स्थितिको प्रश्न उठ्दैन।’यो घटना एक राजनीतिक असफलता पनि हुन भएको चटर्जीको बुझाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘सरकार, पार्टी र प्रशासन छ । सबैले एकसाथ देख्नेछन्। हामीले उनीहरुलाई अपील गरेका थियौँ। उनीहरुले हामीलाई आश्वासन दिएका थिए। हाम्रा नेताहरु कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरु गए, उनीहरुसंग सम्पर्क गरे तर उनीहरुले उचित कदम चालेनन्, यसमाथि।’
नोआखलीमा आक्रमण रोक्नुको सट्टा हिन्दुहरुको विरोधको क्रममा धारा १४४ लगाइएको थियो। यहाँसम्म कि जहाँ आक्रमणको खतरा थियो त्यहाँ हिन्दू समुदायको मानिसहरुले पहिले नै प्रशासनलाई आफ्नो आशंका बताइसकेका थिए।
अर्कोतर्फ, कुमिल्लाको मण्डप-मन्दिरमा बुधवार हमलापछि २२ जिल्लाहरुमा बीजीबीको तैनातीको बावजूद हिन्दुहरुलाई खुलेआम आक्रमण गरियो। सरकारले किन रोक्न सकेन ?
यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मानवअधिकार कार्यकर्ता नूर खान लिट्टनले भने, ‘हिन्दू जनताले अहिलेसम्म आफूहरुमाथि हमला गर्नेहरुलाई चिनेका छैनन् र उनीहरु सजाय पनि पाएको देखेका छैनन् । यदि पक्राउ परिहाले पनि सो व्यक्ति राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हुनेछ ।’
‘हिन्दुहरुमाथिको हमलामा जति धेरै राजनीति छ, त्यसैगरी कसैले पनि उनीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने इच्छा देखाउँदैनन्।’लिट्टनले थपे, ‘यस देशमा हिन्दु समुदायको बिरुद्धमा एकपछि एक घटनाहरु भइरहेछन् तर म ती घटनाहरुलाई न्याय भएको देख्दिन। घटनाहरुमा राजनीति छ, ती नाफाको लागी प्रयोग गरीन्छ। लामर (बन्दरबन) ​​पछि कुमिल्लाको घटना, मैले तौहिदी जनताको ब्यानरमा सत्तारुढ दलका नेतालाई त्यहाँ देखेँ। मैले नसीरनगरमा आरोप लगाएका मानिसहरुलाई सत्तारुढ पार्टीको उम्मेदवार बनेको देखेको छु। तर, पछि तिनीहरुले नाम फिर्ता लिएका थिए।’
सबै दलको संलग्नताको आरोप
एक स्थानीय जनप्रतिनिधिको नाम मन्दिरमा हमलाको सम्बन्धमा मिडियामा देखा परेको थियो जहाँ नूर खान लिट्टनले लामरको घटनाको बारेमा बताए ।
ब्राह्मणबेरियाको नासिरनगरमा भर्खरै भएको संघीय चुनावको लागि अवामी लीगले नासिरनगरमा हिन्दुहरुमाथि आक्रमणको मुद्दा दर्ता गरीएको आरोपमा दोषी ठहरिएका दुई जनालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, पार्टीको चर्को आलोचनापछि नाम फिर्ता लिएको लिइएको थियो, ती दुई जना अझै सत्तारुढ दलसंग छन्।
यस पटक कुमिलामा कुरानको कथित अपमान र एकपछि अर्को मन्दिरहरुमा हमला गर्ने प्रयास गरीयो भनेर कुमिल्लामा दिनभरि पूजा विरोधी जुलूस र प्रदर्शनहरु भएका थिए। जिल्लाको पूजा उद्योग समितिका अध्यक्षले अवामी लिग लगायत सबै दलको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्।
सरकार किन असफल भयो ? कसरी चाँदपुरको हाजीगञ्ज र कुमिल्ला घटनापछि देशभरमा हिंसा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो ?यस्तै प्रश्नहरुको जवाफमा अवामी लीग प्रेसिडियम सदस्य र कृषि मन्त्री डा अब्दुर रज्जाकले यी सबै घटना योजनाबद्द भएको बताए । तर, सरकार असफल भएको अस्विकार गरे ।
‘सरकारलाई असफल भन्न मिल्दैन। यदि सरकार उदासीन भएको भए, उसले कारबाही नगर्ने वा कुनै भूमिका खेल्ने थिएन। ठुलो दुर्घटना हुनसक्थो। यदि हामी चुप रह्यौं भने, सरकार असफल भएको भन्न सक्थ्यौं। सरकार मूक दर्शकको भुमिका निभाईरहेको छैन। यी १३ बर्षमा पहिलो पटक दुर्गा पूजामा यस्तो हिंसा भएको हो। के यसको मतलब यो हो कि हामी तयार थिएनौंरु त्यहाँ तयारी थियो। त्यसपछी झुटो, मनगढन्ते र आधारहीन कुराकानी तर यो घटना एक योजनाबद्ध ढंगले गरिएको थियो। मलाई लाग्छ यो सब अचानक भयो, एक सुनियोजित ढंगले।’
तर, अब प्रश्न उठिरहेको छ कि कुमिल्ला घटनापछि देशका लगभग आधा जिल्लाहरुमा बीजीबीको तैनातीसहित विभिन्न कदम चालेर पनि हिंसालाई किन रोक्न सकिएन ? संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी थियो ?मानवाधिकार कार्यकर्ता र हिन्दु समुदायको तर्फबाट प्रश्न उठेको छ कि हिंसाको तत्काल मिडिया रिपोर्टको अभाव र हिंसाको बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनु जस्ता कारणले पनि स्थिति अनियन्त्रित हुनमा भूमिका खेलेको छ।